သစ်ကောင်းအိမ် | MoeMaKa Burmese News & Media
Writer Min Lu health critical
K ငြိမ်းချမ်း- စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ ဗမာ့စီးပွားရေး
>Jap boxers and Shwe boxers
>for Daw Khin Kyi
Posts Tagged ‘ သစ်ကောင်းအိမ် ’
သစ်ခက်သံလွင် – အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒုက္ခသည်များနေ့ ကဗျာများ
သစ်ခက်သံလွင် – အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒုက္ခသည်များနေ့ ကဗျာများ (သစ်ကောင်းအိမ်၊ မြင့်အောင်သန့်၊ AMT၊ ခင်ရင်မောင်) (မိုးမခ၊ သစ်ခက်သံလွင်) ဇွန် ၂၁၊ ၂၀၁၆ အုံးပြန့် www.ladders-for-stairs.com တထစ်ချင်း...
လူလေးအတွက် တေး သစ်ကောင်းအိမ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၂ နှစ်ချို့ငါးခူကြီးတွေစားရကံကြုံဖုို့ အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်း ရွှေတိဂုံဘုရားတောင်ဘက်မုခ်ခြေရင်းက ရေကန်ကြီးထဲ သက်စေ့လွှတ်ခံလုိုက်ရတဲ့ ငါးတွေလုို … မြေခွေးနဲ့ပေါင်းပြီး ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်သလုို ညီညွှတ်ရေးမှာ အချစ်ရေ…. တုို့တတွေလွတ်မြောက်ကြ...
ကွယ်လွန်သူနှင်းများ… (Thit Kaung Eain)
ကွယ်လွန်သူနှင်းများ… သစ်ကောင်းအိမ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၂ လူ့အဖြစ်ဆုိုတာ တရက်တရက် ကုိုယ်သေတွင်းကုိုယ်နက်အောင် တူးနေရတဲ့ ရက်စွဲတွေပေါ့… ရန်သူကုိုမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖုို့ကြွေးကြော်ရင်း ရန်သူဖြစ်သွားတဲ့မိတ်ဆွေတွေကုိုပဲ မနက်လင်းတုိုင်း ဆေးလိပ်မီးခိုးတွေကြား ဟာသ တခုလုို ငါကောက်ရ … အဝီစိအထိဘရိတ်ပေါက်နေတဲ့...
လပြည့်ည သစ်ကောင်းအိမ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၂ ဒေဝဒတ်ရဲ့ ကျီးမနုိုးပွဲညမှာ အမဲလုိုက်ခွေးတွေကုို ဆလုိုက်ထုိုးပေးလုို့ ဇာတ်တူသားငါးအုပ်ရှိရာ တံငါကုိုကွန်ချက်ပြဖုို့ လင်းပုိုင်တကောင်လုို ထပွက်နေတဲ့လရောင်မှာ တန်ဆောင်မုန်းထိစောင့်ခူးခဲ့တဲ့ မယ်ဇလီဖူးတွေလည်း ဆေးဖက်မဝင်တော့ဘူး….. (၁၁. ၂၈....